Khabiirka Cimilada wuxuu soo bandhigaa Tilmaame loogu talogalay inuu abuuro Qorshe Nidaam ah oo Ganacsi Email ah
Badankoodeyaal internetka ah ayaa laga yaabaa inay leeyihiin, hal dhibic markii la isku dayey in ay isticmaalaan emails sida farsamooyinka suuq geynta. Sidoo kale, suuq-geynta emailka ayaa ah mid aad u xeeladeysan oo istiraatiijiga ah ee suuq-geynta online-ka ah iyada oo ay ugu wacan tahay wax-qabadkeeda. Intaa waxaa dheer, suuq-geynta emailka waa mid deg deg ah oo sahlan in la fuliyo. Waxaa la yaab leh, suuqyeyaha online waxay ku calaamadiyeen meel u dhow 84% dhammaan emails sida spam ama si xun u tirtiray. Dhammaan e-mailada ma helayaan natiijooyinka loogu talagalay sababtoo ah khaladaadka si fudud looga hortagi karo.
Marka la eego, Alexander Peresunko, khabiir sare oo ka socda Semt , wuxuu tilmaamayaa tilmaame khaas ah oo lagu aqoonsanayo cilladahaas oo kale - мягкий строп.
Marka hore, fiiri xididka. Xayeysiiska suuq-geynta ayaa joojin kara galka 'spam recipients' sida kuwa kor loogu qaadayo fariinta loo isticmaalo in lagu soo diro farriimaha emailka. Calaamadaha aan loo magacaabin adeeg kasta, halkii ay ku soo diri lahaayeen emails-ka guri-guri iyada oo loo marayo Muuqaalka, waa inay tixgeliyaan qaadashada Adeeg Bixiye Email (ESP). ESP badankooduna waa mid si fudud u fududeynaya maareynta liiska waraaqaha boostada marka lagu daro suurtagalnimada kor u qaadista gaarsiinta
Marka labaad, waqtigu waa muhiim. Waxaa lagula talinayaa in suuqgayaga internetka ay ka hortagaan inay diraan emails saacadaha subaxda. Kama dammaanad qaadeyso in e-maylku kor u qaadi doono sanduuqyada qofka qaata adigoo u diraya subaxa. Taa baddalkeeda, emailsadaasi waxay noqon karaan kuwo aan la ogeyn tan iyo markii macaamiilku uu lahaa farriimo badan saacado subixii. Kuwa ugu waxtarka leh ee diraya emailada suuq-geynta waa fiidkii marka dadka qaata ay u muuqdaan in la arko marka qof qaata uu furo sanduuqa boosteejada labaad ama saddexaad.
Seddexaad, jadwalka ku-oolka ah ee jajaban waa mid muhiim ah. Jadwalka emailka adag wuxuu noqon karaa mid khatar ah tan iyo markii qofku qaato waqtiga dhabta ah, iyo macaamiisha laga yaabo inay leeyihiin jadwal jajaban..Sidaas darteed laguma talin karo inaad waqti u soo dirto emails si cad u gaar ah koox gaar ah. Taas beddel, jadwalka jumlada ah ee faa'iidooyinka ugu badan.
Ka dib, sii wanaajinta sifooyinka emaylka loo soo diray macaamiisha si looga fogaado in ay iska ilowsiiyaan dadka qaata. Tusaale ahaan, suuqgeyaga internetka waa inaysan u dirin emails oo leh habdhaqan dareen ah dadka qaata. Sidoo kale, magacyada shirkadaha waa in laga fogaadaa mawduuca mawduuca.
Waraaqaha suuq-geynta waa in loo qaybiyaa sida kooxo bartilmaameed. Xidhiidhkan, suuqyadda internetka waa in ay kala saaraan macaamiisha suurtagalka ah iyo macaamiisha daacad u ah. Koox kasta oo ka mid ah ayaa sheegaysa baahida loo baahan yahay in lagu xaliyo marka ay direyso emails.
Horumarinta akhristayaasha e-mailada la soo diray. In ka badan saddex-meeloodow ee dhammaan emails waxaa furan telefoonada gacanta. Sidaa darteed, si looga fogaado emails spam, suuqyada internetka waa inay hubiyaan in farriimaha loo akhriyi karo dhamaan qalabyada. Tusaale ahaan, sawirrada waa in si fudud loo arki karaa telefoonka.
Farsamooyin kale oo lagu tirtirto emaamada spam waa farriimaha ay weheliso qalabka kale ee suuq-geynta sida website-ka iyo warbaahinta bulshada. Luuqad la aqoonsan karo iyo luuqad hal-abuur leh waa in loo adeegsadaa dhammaan qaybaha suuq-geynta ee ku xiran emailka.
Naqshadeynta suuq-geynta oo qaabka iibiya. Shaabooyinka gaaban ama dheerba maaha kuwa ugu fiican. Halkii, suuqyadu waa in ay maalgashadaan fariimo email ah oo iibiya alaabadooda. Tusaale ahaan, suuqyadda internetka waa inay siiyaan dadka aqbalaya macluumaadka muhiimka ah ee sharxaya dalabyada iyo erayada yar.
Ugu dambeyntii, suuqyadda internetka waa inay ku shaqeeyaan hababka emailka. Kuwani waa "akhbaar" fariimo emayl ah oo fariimo ah oo loo diro hab gaar ah oo loogu talagalay ololaha suuq-geynta. Nidaamka waa in la dejiyaa si loo soo diro fariimo indho-qabad ah si loo soo jiito akhristayaasha. Xogta aadka u fiican waa fure u ah ilaalinta habka emailka waxtarka leh